Wholesale Wireless peni muridzi Mugadziri uye Mutengesi Sheerfond
Ugere muhofisi yakatsvinda, padhesiki rako, pane chinoshamisira chinyoreso chinobata, chinogona kuchengeta yako hofisi zvigadzirwa, kuchaja yako nharembozha, uye inogona kushandiswa sechigadziro chefoni yako. Ichavhenekera zvakare, ichiita kuti iwe ude kuti zvirimo zviratidzwe zvinopenya muhofisi, uye zvichachinja nemavara akasiyana, kuitira kuti shamwari dzakakukomberedza dzimirire kuti uzviteerere, izvo zvinonyanya kufadza, zvinoita kuti basa rako riwedzere kufara , uye nakidzwa nekunakidzwa kwehupenyu uchishanda. Kurumidza uye kurudzira yakanaka yakadaro chigadzirwa kune ako anodikanwa vatengi uye shamwari! Kunyanya kukosha, kurumidza uye uzvionere wega.
1. Desktop kuchengetedza basa: iwe unogona kuisa zvinyoreso, mapanga, madhimoni, stapler, maearphones, kuchaja tambo, uye zvimwe zvekuhofisi zvekushandisa uye zvigadzirwa zvemagetsi mubhokisi rekuchengetera, uye hauzomboona iro rakashata tafura.
2. Nhare mbozha isina waya yekuchaja basa: 10W isina waya kuchaja, hapana chikonzero chekuita chero basa kubhadharisa foni, isa foni pane iye muridzi wechigadzirwa chechigadzirwa, uye kuchaja foni yako nekukasira, iri nyore, iri nyore, kana iri nyore.
3. Rega logo yako ipenye, ruvara rwayo ruri kugara ruchichinja, runogona kukwezva maziso eshamwari, ichiona logo yako, kushambadzira muhupenyu.
4. Inobata nharembozha basa, nharembozha inoiswa pamubati, kusunungura maoko ako nekupa mawoko ako rusununguko rwakawanda.
5. Ichi chigadzirwa chinoshandisa zvese zvinokanganisa PU zvekuchengetedza nharaunda, izvo zvine hushamwari kune zvakatipoteredza uye zvine hutano kumuviri.
6. Dhizaini yechigadzirwa yakanaka kwazvo.
Iko kushandiswa kukuru kwechigadzirwa.
(1) Zvipo zveshamwari uye bhizinesi, zvipo zvekusimudzira.
(2) Mahofisi emahofisi
Production muitiro sumo:
Kambani yedu yapfuura iyo ISO9001 yemhando system chitupa. Izvo zvigadzirwa zvezvigadzirwa zvakanyatso kuyedzwa. Izvo zvigadzirwa zvinonyatso kudzorwa panguva yekugadzirwa. Kugadzirwa kwezvinhu zviri 100% zvakagadzirwa nemaoko. Chigadzirwa chega chega chinofanirwa kuyedzwa usati wasiya mufekitori kuti uve nechokwadi chekuti vatengi vanogashira Chigadzirwa chese chakasvika chigadzirwa chakakodzera
Ichi zvakare chigadzirwa chedu chepamutemo, rega sainzi uye tekinoroji zvishande hupenyu, regai hutsva huunze mufaro
IPone Cable, TYPE-C Cable, micro tambo, Nhare dzenhare
Nyowani Bhizinesi Kubhadhara, Chipo chekusimudzira, zvipo zve frer
saizi yechigadzirwa 180mm * 100mm * 115mm
chigadzirwa uremu 250g
kurongedza saizi 190mm * 110 * 115mm
nhamba / pabhokisi
uremu / bhokisi
Pashure: Kuchengetedza chigadzirwa
Zvadaro: 3in1 isina waya kuchaja mbeva pad
Zvekugadzira Zviyeuchidzo Peni Mubati
Executive Pen Mubati
Pen Mubati Dhizaini
Pen Mubati Dhizaini Pfungwa
Peni Mubati weDeski
Chinyoreso Chinobata Ganda
Pen Anobata Wireless Charger
Isina waya Runhare Chaja Peni Mubati